Air Senegal dia mitondra ny Airbus A330neo voalohany any Afrika
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Air Senegal dia mitondra ny Airbus A330neo voalohany any Afrika
Air Senegal dia naka ny A330-900 voalohany avy amin'ny tsipika famokarana Airbus any Toulouse. Ilay kaompaniam-pitaterana an'habakabaka afrikanina voalohany nanidina fiaramanidina vaovao manerana an'i Airbus izay ahitana motera teknolojia farany, elatra vaovao misy aerodinamika nohatsaraina ary famolavolana wingtip miolikolika, fakana fanao tsara indrindra amin'ny A350 XWB.
Natao tamina kabine kilasy telo misy 32 kilasy fandraharahana, seza 21 Premium Plus ary seza 237 toekarena, mikasa ny hampiasa ny A330neo voalohany amin'ny làlany Dakar-Paris i Air Senegal ary hampivelatra bebe kokoa ny tamba-jotra antonony sy lavitra.
Ny A330neo no tena fiaramanidina fiaramanidina vaovao miorina amin'ny haben'ny A330 XWB tena be mpividy indrindra amin'ny teknolojia A350 Powered by ny maotera farany Rolls-Royce Trent 7000, ny A330neo dia manome ambaratongam-pahombiazana tsy mbola nisy toy izany - miaraka amin'ny may 25% ny solika ambany isaky ny seza noho ireo mpifaninana teo aloha. Miaraka amin'ny Airspace avy amin'ny tranoben'i Airbus, ny A330neo dia manolotra traikefa mpandeha tokana miaraka amin'ny habaka manokana sy ny rafitra fialam-boly fidirana ao anaty sidina ary ny fifandraisana.
Fizahan-tany any Jamaika: etona feno miaraka amin'ny fiarovana sy fiarovana ny mpitsidika
Air Partner dia manambara birao vaovao any Houston sy Singapore